Cunnooyinka tamarta: waxa la cuno si ay ugu shaqeeyaan awood buuxda | Ragga Stylish
Cunnooyinka tamartu aad ayey faa'iido u leeyihiin ka hor iyo ka dib ciyaaro isboorti. Waxay sidoo kale hagaajinayaan niyaddaada waxayna kuu dammaanad qaadayaan tamar ku filan hawl maalmeedkaaga, sidaas darteed qof walba dantiisa ayaa ugu jirta inuu ogaado waxa cuntooyinkani yihiin.
Cunnooyinka soo socdaa ma aha oo kaliya ilo weyn oo xoog iyo adkaysi leh, laakiin intabadan sidoo kale way fududahay in la qaado. In sidan, waxaad ku ridi kartaa boorsadaada jimicsiga ama waxaad ku haysan kartaa xafiiska si aad u soo wacdo markaad daal dareento.
1 Sida tamar looga helo cuntada
1.3 Kordhi joogitaanka folic acid ee cuntadaada
2 Cunto firfircoon oo caafimaad leh
2.6 Kalluunka dufanka badan
2.10 Looska iyo iniinyaha
Sida tamar looga helo cuntada
Haddii aad rabto inaad dareento xoog maalintii oo dhan, waa lagama maarmaan inaad bilowdo maalinta inaad ku raaxeysatid quraac nafaqo leh oo aad u nafaqo badan. Hubso in cuntadaada ugu horreysa ee maalinta ay bixiso fiber badan, iyo sidoo kale karbohidraatyo isku dhafan, dufan caafimaad leh, iyo borotiin.
Sir kale oo dadka tamarta lihi waa samee 5-6 cunto yar halkii aad ka ahaan lahayd seddex waaweyn. Caadadani waxay ka caawineysaa heerarka tamarta inay ahaadaan kuwo deggan.
Jirka iyo maskaxdu waxay u baahan yihiin karbohaydraytyo ku shaqeeya awood buuxda. Cunnooyinka karbohaydraytka badani waa shidaalka ugu jecel jirka. Furaha ayaa ah in lagu sharfo miraha oo dhan halkii laga heli lahaa macmacaanka.
Badarka oo dhan waa ilo xasilloon oo muddo dheer soconaya Sababtoo ah si tartiib tartiib ah ayey u nuugaan, halka macmacaanku uu kor u kacayo heerarka sonkorta dhiiggaaga, taasoo kaa dhigeysa inaad dareentid daal iyo cariiri ka dib.
Barootiintu muhiim ayey u yihiin tamarta. Tixgeli digaagga iyo digaagga aan maqaarka lahayn. Haddii aad tahay khudradeed, waxaad ka heli kartaa borotiinka khudradda badan, oo ay ku jiraan digiraha. Macdanta (magnesium, selenium ...), fiitamiinnada (folate, vitamin B12 ...) iyo fibre sidoo kale kama maqnaan karaan cuntadaada.
Kordhi joogitaanka folic acid ee cuntadaada
Fiiri maqaalka: Cuntooyinka leh folic acid. Halkaas waxaad ka heli doontaa wax kasta oo ku saabsan nafaqadan muhiimka ah, oo ay ku jiraan cuntooyinka ugu fiican ee lagu helo.
Dhankeeda, dufanku sidoo kale wuxuu siiyaa qadar wanaagsan oo tamar ah jirka, sida ay tahay kalluunka dufanka leh iyo lowska. Dhanka kale, laguma talin karo in lagu xadgudbo.
Cunto firfircoon oo caafimaad leh
Waxaa jira cuntooyin badan oo caafimaad leh oo ku siin doona tamar markaad u baahato. Aan aragno waxa ay yihiin:
Muusku malaha waa cuntada ugu badan ee la isticmaalo marka aad u baahan tahay inaad si dhakhso leh tamar u hesho. Mana aha wax lala yaabo, maxaa yeelay waxtarka kaarbohaydraytyada, kalsiyamiyamka iyo fiitamiin B6 ee mooska ay ka dhigayaan midhahan ikhtiyaar aad u fiican oo aad dib ugu buuxin karto baytariyadaada wakhti kasta, iyo meel kasta.
Sidaad ogtahay, bariisku waa il tamar aad u wanaagsan. Ciyaartooydu badanaa waxay doorbidaan bariiska cad maxaa yeelay waxay uga dhigan tahay tamar deg deg ah muruqyadooda kahor ama kadib jimicsi adag. Si kastaba ha noqotee, heerka nafaqada, karbohidraatka isku dhafan ee nooca isku dhafan ayaa loo tixgeliyaa inay ka fiican yihiin. Marka loo barbardhigo bariiska cad, bariiska buniga ah wuxuu kuu dammaanad qaadayaa qadar sare oo ah borotiin, fiber, iyo manganese (macdan door muhiim ah ka ciyaara abuurista tamarta). Hal koob oo bariis bunni ah waxaa ku jira ku dhowaad dhammaan manganese-ka aad u baahan tahay maalintii.
Marka ay timaado helitaanka tamar cabitaannada, kafeega ayaa ka sarreeya xulashooyinka intiisa kale. Cabitaankani wuxuu kiciyaa jirkaaga iyo maskaxdaada labadaba iyada oo ay ugu wacan tahay hodanka ay ku leedahay kafeega. Waa in la ogaadaa in kafeega uu yahay xal daqiiqad ah (saamaynteeda waxay socotaa waqti gaaban marka la barbar dhigo cuntooyinka kale ee tamarta leh). Intaa waxaa sii dheer, in kasta oo ay tahay ikhtiyaar weyn oo lagu tago, waxaa lagugula talinayaa inaadan cabbin wax kabadan afar koob maalintii. Markii qaxwaha si xun loo isticmaalo, halista hurdo la’aanta iyo dhibaatooyinka kale ee aan loo baahnayn ayaa sii kordha.
Iyo kicin kale oo la tixgeliyo: shukulaatada madow. Cunista inyar oo shukulaatada noocan ah marwalba way caawinaysaa inaad sii wadato inay shaqeyso wakhti kaydkaaga tamarta uu ku hanjabayo inuu yaraanayo.
Hantidaada ku jirta borotiino iyo walxaha kale ee sida dhow ula xiriira tamarta ukunta ayey u badalaan mid ka mid ah shidaalka ugu fiican jirkaaga.
Kalluunka dufanka badan
Thanks to borotiinadiisa, asiidh dufan leh iyo fiitamiinada B, kalluunka dufanka badan wuxuu kaa caawin karaa inaad daalka ka joojiso. Dhowr jeer oo isbuucii la cuno oo ah tuna, salmon ama kalluun kale oo dufan leh ayaa badanaa lagula taliyaa inay qayb ka tahay cunno isku dheelitiran.
Haddii aad raadineyso cunto ku siineysa tamar muddo dheer socotaa, quinoa waa ikhtiyaar weyn. Lagu ammaano waxtarkeeda caafimaad, quinoa waxay ku siisaa karbohidraat, faybar iyo borotiin, iyo sidoo kale fiitamiino iyo macdano.
Ilaha kale ee tamarta muddada dheer ee mudan in la tixgeliyo waa boorash. Aad loogu taliyay in la sameeyo quraac dhammaystiran inuu kaa caawiyo inaad sii socotid saacado.
Waxyaabaha qadiimiga ahi waxay ku siin karaan tamar badan si aad ugu wajahdo hawl maalmeedkaaga. Hodan ku ah karbohaydraytyada iyo fiber, misirku waa tusaale weyn.
Looska iyo iniinyaha waa ku habboon helitaanka tamar si dhakhso leh iyo meel kasta. Hel chia, flax, ama abuurka bocorka. Haddii aad doorbideyso lowska, tixgeli cuntooyinka tamarta leh sida yicibta, iniinta, ama lacagta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cunto firfircoon